Yini okufanele ngiyazi ngokucwaninga ngegama elingukhiye le-Amazon ukuze ngibe umdayisi omuhle?
Wonke umthengisi otholakala ku-intanethi othengisa i-Amazon uyazi ukuthi ucwaningo lungaba isisekelo esiqinile sebhizinisi elihamba phambili lokuthumela phansi. Futhi masibhekene nayo ngesikhathi esisodwa - imikhuba yamakhasimende ku-Amazon idinga ukucwaninga nokuqonda okujulile, Yebo, uma ufuna uhlu lwakho lwemikhiqizo luhle kahle futhi luboniswe phakathi kwemiphumela yokucinga ephezulu. Ekugcineni - ukukukhiqiza ithrafikhi engaphezulu kusuka kwamagama angukhiye afanelekayo, ngakho-ke ukwandisa ukuguqulwa kwakho. Kodwa into ukuthi ngokungafani nezinjini ezinkulu zokusesha (njenge-Google ngokwayo, kanye ne-Yahoo, noma i-Bing), i-Amazon's search ranking algorithm inezici zayo "ezimaphakathi nomkhiqizo". Kusho ukuthi kusukela ngombono we-Search Engine Optimization (SEO), awunconywa ukugcina ukubheja ikakhulukazi ku-Google AdWords, okungenani uma kuziwa ocwaningweni lwegama le-Amazon elingukhiye. Into yukuthi i-Keyword Planner ihle kakhulu ekuqondeni izimo zokusesha zangempela zabathengi bukhoma. Ngesikhathi esifanayo, noma kunjalo, leli thuluzi eliyisisekelo alisoze lithatha idatha enembile edingekayo yokwenza ukukhethwa kwegama elingukhiye elihlosiwe ngokuhlelwa kokuhlelwa komkhiqizo kahle njalo kuhlala phezulu kokuseshwa.
i-Amazon SEO kanye ne-Product Ranking Algorithm
Ake sihlolisise lolu daba futhi sibone ukuthi i-A9 isebenza kanjani (i-Amazon enkulu yokusesha isimo se-algorithm). Uma ucabangela ukuthi i-A9 iyakhathalela ukuthenga okuphelele kulokhu okuthengiswayo kwe-intanethi ngokugcwele, uhlu lwayo lwe-SERP lusekelwe ezicini ezimbili ezilandelayo:
Isici sokusebenza - kusho ukuthi yonke into enegama elihle nomlando wokuthengisa othembekile kuyoba amathuba okuboniswa eduze ne-top search ye-Amazon yomkhiqizo. Amamethrikhi wokusebenza okuyisisekelo yi-CTR (ukuchofoza-ngezinga), i-CR (izinga lokuguqulwa), futhi nakanjani ukuthengisa kwangempela kwenetha.
Isici sokubheka phambili - sibonisa ukuthi isihloko somkhiqizo owenziwe ngendlela efanele, incazelo kanye nezinhlamvu ezilungiselelwe kahle amagama angukhiye aphezulu (okusho ukuthi kufana nemibuzo yokucinga eceliwe ngabathengi abaphilayo) - izoba nethuba elinamandla lokuboniswa ngokucacile ekusesheni komkhiqizo we-Amazon. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
indlela yokufinyelela eyengeziwe (kunokuba kuhlaziywe ngegama elingukhiye elivamile). Futhi into ehambisanayo yilokho okufanele igxilwe ngaphambi kwanoma yini enye. Yingakho ngincoma ukukhetha ithuluzi elingukhiye elifanele le-Amazon kanye nokucwaninga okungase kunqobe izinhlanganisela zosesho ezingakwenzela ukuguqulwa kwangempela ngamadili wangempela. Kepha mina, ngasebenzisa ithuluzi lokucwaninga elingukhiye le-Sonar Amazon. Yiqiniso, kungukuthi kuphela ukuthi unqume ukuthi iyiphi ithuluzi noma uhla lwe-inthanethi ongakhetha kukho. Noma kunjalo, usebenzisa i-Sonar Nginayo izinzuzo ezikholisayo ngempela, ezifana nokwehlisa uhlu olusheshayo lweziphakamiso zegama elingukhiye eliphezulu (okubonakala sengathi liyisiqalo esihle), ucwaningo lokuncintisana (ukuthatha imishwana yokusesha ephezulu-ngqo kusuka ukuhombisa abathengisi kwakumangalisa ngempela), ukuqonda okubalulekile nokucubungula kokuncintisana kokuncintisana kokunconywa kunconywa lapha kanye nakakhulu, ngisho nangaphezulu.